जर्नेलको जुवा अड्डामा कसले मार्ने छापा ? | Citizen Post News
जर्नेलको जुवा अड्डामा कसले मार्ने छापा ?
२०७४ चैत्र २७ गते ०७:५५
काठमाडौं । विगत केही वर्षदेखि राजधानीका क्यासिनोमा नेपाली प्रवेशलाई कडाई गरिएपछि क्यासिनो शैलीमा जुवा खेलाउनेको समूह राजधानीमा सक्रिय हुँदै आएको छ । क्यासिनोमा नेपाली जुवाडेको प्रवेशमा प्रहरी आक्रमक भएकै कारण क्यासिनोकै शैलीमा घर-घरमा मिनी क्यासिनो अर्थात अवैध जुवा अखडाहरू सञ्चालन गर्ने समूह सक्रिय भएका हुन् ।
क्यासिनो कै सुबिधासहित यस्ता मिनी क्यासिनो अहिले उपत्यककामा पाँच दर्जनका हाराहारीमा सञ्चालन रहको स्रोत बताउँछ । तिमध्ये एक चल्तीको अखडा ललितपुरको सातदोबाटो स्थित महानगरीय प्रहरी वृत्तको पछाडि रहेको छ । आशा लिम्बुको नाममा रहेको उक्त घरमा दैनिक जसो करोडौं रूपैंयाको जुवा खेल हँदै आएको प्रहरी स्रोतको दावी छ । यस बारेमा ललितपुर प्रहरी परिसर र सातदोबाटोका प्रहरी जानकार रहेता पनि उनीहरु आँखा चिम्लिदै आएका छन् ।
लिम्बुको घरमा चाँपागाँउ टाखेलका लब बस्नेतले जुवा खेलाउँदै आएका हुन् । बस्नेतलाई नेपाली सेनाका जर्नेल होमकुमार लावतीले साथ दिँदै आएको स्रोतले बतायो । बस्नेत पनि सेनाका पूर्व हबल्दार हुन् । उता टोले गुण्डा घवाश्याम महर्जनले पनि उक्त जुवा अखडाबाट हप्ता खादै आएका छन् । जुवा अखडा बेलुका ६ बजेदेखि बिहानको ४ बजेसम्म सञ्चालन हुँदै आएका जानकारहरू बताउँछन् । दैनिक ५० देखि ६० लाखसम्म हारजित हुने उक्त जुवा अखडाबाट बस्नेतले १० लाख जति कमिशन उठाउँछन् ।
उक्त रकम टोले गुण्डादेखि ललितपुर प्रहरी परिसरले समेत भाग पाउँदै आएका छन् । बालुवा व्यापारी अष्ट लामा, मुर्ती व्यापारी नन्द मर्हजन, जग्गा व्यापारी शुशील न्यौपाने, शेयर कारोबारी मिनबहादुर राउत, हार्डवेयर ब्यापारी सचिन मर्हजन र सेनाका जर्नेल लावती उक्त जुवा अखडाका भीआइपी जुवाडे भएको बताइएको छ । जुवा अखडा सञ्चालक बस्नेतले प्रिपेड जुवा अखडाको शैलीमा धापाखेलको हाईटस्थित रहेको जर्नेल लावती कै घरमा समेत जुवा खेलाउँदै आएको स्रोतले बतायो । क्यास नहुने जुवाडेलाई बस्नेत र जर्नेल लावती आफैंले जग्गा बैनाको कागज र चेक लिएर जुवा खेल्ने, पैसा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । जनप्रहारबाट